Ururka Al Shabaab ayaa fagaaro ku yallo deegaanka Labaatan jiroow ee duleedka Magaalada Baydhabo ayey ku toogteen Askari ka tirsanaa ciidamada Dowladda – STAR FM SOMALIA
Ururka Al Shabaab ayaa fagaaro ku yallo deegaanka Labaatan jiroow ee duleedka Magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay, waxa ay ku toogteen Askari ka tirsanaa ciidamada Dowladda Federalka Somaliya ee ku sugan Magaalada Baydhabo.
Askarigan ayaa la qabtay xilli uu ka ambabaxay Magaalada Baydhabo uuna doonaayay inuu gaaro Magaalada Xudur ee Gobolka Bakool sida ay sheegeen Shabaabka.
Shabaab ayaa sheegay kolkii ciidamadooda ay qabteen Askarigaasi inay ku wareejiyeen maxkamada Shabaab ee Gobolka Baay, kadibna lagu xukumay Askariga dil toogasho ah.
Fagaaro ku yaallo deegaanka Labaatan jiroow ee Gobolka Baay ayeey ku toogteen Shabaabka Askarigaasi, waxaana magaca Askariga Shabaab ay toogteen ay ku sheegeen Bashaar Axmed.
Shabaab ayaa ku hanjabay inay dili doonaan Askarta ka tirsan ciidamada Dowladda Federalka Somaliya ee Shabaab ay gacanta ku dhigaan.
Saraakiisha ciidamada Dowladda Federalka Somaliya ee Gobolka Baay weli kama aysan hadlin Askarigaan ka tirsanaa ciidamada Dowladda ee lagu toogtay Gobolka Baay.
Madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ku qaabilay Wakiilka Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Nicholas Kay